Buy ကား ၊ ဆိုင်ကယ် GPS in ရန်ကုန် (50,000 Ks) on ipivi
ကား ၊ ဆိုင်ကယ် GPS
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား များမပျောက်ဆုံးစေရန်အတွက် GPS တပ်ဆင်လိုက်ပါ။
- သင့်ဆိုင်ကယ် ၊ ကား ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာကို ဖုန်းထဲကနေ အချိန်​နဲ့တပြေးညီ သိရှိနိုင်ခြင်း
- သင့်ဆိုင်ကယ် ၊ ကား မောင်းထားသော လမ်းကြောင်းကို လွန်​ခဲ့တဲ့ (6) လစာ အထိ ဖုန်းထဲကနေ Play Back ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
- သင့်​ဆိုင်​ကယ်​ ၊ သင့်​ကား သတ်မှတ်အမြန်နှုန်းထက် ပိုမိုမောင်းနှင်ပါက Alarm ပေးခြင်း
- မြို့ Area သတ်မှတ်၍ နယ်မြေသတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း (မိမိသတ်မှတ်ပေးထားသော Area ကိုကျော်လွန်သွားပါက Alarm မြည်ခြင်း)
- သင့်​ ဆိုင်​ကယ်​ ၊ သင့်​ကား တနေ့တာဘယ်လောက် ကီလိုမီတာဝေးဝေးထိ အထိမောင်းထားလဲ တွက်ချက်ပေးခြင်း
- GPS ကို သူခိုးမှ ဖျက်ဆီးလျှင် ပိုင်ရှင်ဆီကို ချက်ခြင်းတိုင်ကြားခြင်း
- အထဲမှာ Battery သီးသန့်ပါဝင်ခြင်း
- ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်လျှင် ပိုင်ရှင်မှ ချက်ခြင်းသိနိုင်ခြင်း
- ဆိုင်ကယ် ၊ ကား အခိုးခံရပါက ချက်ခြင်းလိုက်ရှာနိုင်ခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။
ကားမှာပဲတပ်တပ် ဆိုင်ကယ်မှာပဲတပ်တပ် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး အလွန်ရိုးရှင်းပါတယ်…
တစ်လုံးမှ (50000) ကျပ်ပါ
ဒီတစ်ခေါက်တော့ (2) လုံးထဲပဲကျန်တော့လို့ အမြန်ဆက်သွယ်မှာယူလိုက်တော့နော်
Hp Elitebook Intel Celeron
Acer V5 i3 3rd gen. Nvidia 1GB
Acer i7 2nd gen. Nvidia 2GB. ram 8GB. 1000GB
အမည်:ကား ၊ ဆိုင်ကယ် GPS
ဈေးနှုန်း: 50,000 Ks